Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Niainga niverina lehibe ny fizahantany fizahan-tany any Jamaika
Ny cruise shipping, singa iray lehibe amin'ny sehatry ny fizahan-tany ao Jamaika, izay nahitana fatiantoka lehibe indrindra tamin'ny hetsika fizahan-tany rehetra noho ny areti-mandringana COVID-19, dia miomana amin'ny fiverenana lehibe.
Na eo aza ny valanaretina pesta, mahita fanantenana kely amin'ny fitsangantsanganana i Jamaika.
Ny fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ireo mpiara-dia amin'ny sambo dia efa nametraka fifanarahana tamin'ny Cruise Line norveziana noho ny fitaterana ireo sambony any Montego Bay.
Ny fitaterana an-trano amina sambo fitsangantsanganana amerikana lehibe dia midika fidiram-bola ho an'ny famatsiana.
Raha nanokatra ny adihevitra isam-paritra tao amin'ny parlemanta ny talata 20 aprily lasa teo ny minisitry ny fizahan-tany, Hon Edmund Bartlett, dia nilaza fa nahita “fanantenana kely” i Jamaika tamin'ny fandefasana sambo, na dia teo aza ny fijanonan'ny areti-mandringana amin'ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tany.
Na dia misy aza ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo lehibe mampifandray ny Ivotoerana Amerikanina ho an'ny fanaraha-maso ny aretina amin'ny zonay hiondrana an-dranomasina indray, ny minisitra Bartlett dia nitatitra fa: andalana ary Destiny Jamaika. ” Ny drafitra, hoy izy, dia tsy natao hisarihana ireo sambo fitsangantsanganana hiverina any amin'ny seranan'i Jamaika ihany, fa hanamorana ny tombony bebe kokoa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny alàlan'ny fandaniana sy ny fampidirana.
Ny fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ireo mpiara-dia amin'ny sambo dia efa namoaka fifanarahana tamin'ny Norvezy Cruise Line (NCL) momba ny fitaterana an-trano ny sambony any Montego Bay, manomboka ny 7 Aogositra, amin'ity taona ity. Ity fampandrosoana ity, hoy izy, dia hanova lalao.